07/02/2018 - Page 3 sur 5 -
Sokatra tratra tany Fianarantsoa : Haverina hohenoina ny mpamilin’ilay sprinter
Araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny polisy any Fianarantsoa, dia fantatra fa haverina hohenoina anio eo anatrehan’ny fampanoavana any an-toerana ilay mpamily, tompon’antoka tamin’ny fitondrana ireo sokatra miisa 245, natao tanaty vatam-paty, sy ireo rongony …Tohiny
Ilafy, Alasora : Mirongatra ny fisolokiana tany
Mirongatra tsy misy toa izany ny karazana fisolokiana amin’ny endriny samihafa mandalo ao amin’ny tribonaly ankehitriny. Anisan’izany ny raharaha fisolokiana tanin’olona, efa mahasahy manao taratasy hosoka mihitsy ireo mpisoloky hibodoana izany. Efa saika nahazo vahana …Tohiny
Manjakandriana : Mpivady maty nilatsaham-potaka
Hatramin’ny niandohan’ny fotoam-pahavaratra teto an-drenivohitra sy ny manodidina nankaty, dia tsy mitsahatra ahazoam-baovao ny olona matin’ny varatra ateraky ny kotroka entiny mandritry ny orana tsy nitsahatra tamin’izany. Isan’ny niantefan’izany tranga mampalahelo izany ny mpivady avy …Tohiny
Fakana an-keriny : Mifarimbona ny governemanta
Nibahana betsaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly, izay notarihin’ny praiminisitra mpandimby toerana, ny niadiana hevitra sy nanadihadiana ny ezaka atao amin’ny fampitoviana tadin-dokanga ny ady atao amin’ ny fakana an-keriny. Tafiditra indrindra ao anatin’ …Tohiny
Aksaf Power : Mamokatra herinaratra 60 MW
Tanteraka ny fanamby. Notokanana omaly, teny amin’ny ivon-toeram-pamokarana herinaratra Ambohimanambola, ny foibem-pamokarana iray avy amin’ny orinasa Tiorka Aksaf Power. Tonga nanome voninahitra ny lanonana sy nitokana izany tetikasa goavana eo amin’ny famokarana herinaratra izany ny ...Tohiny
Rajoelina sy ny forongony : Tsy mieritreritra afa-tsy fanonganam-panjakana